စိုင်းစိုင်းသို့ SNK | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » စိုင်းစိုင်းသို့ SNK
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Jul 31, 2015 in Myanma News |9comments
စိုင်းနော်ခမ်းရေ.. တမလွန်ဘဝက ဝမ်းသာပါကွာ။ မင်းအတွက် သမဒဂျီး အူးသိန်းဆိမ် လာဘ်စားခြေ လိုက်ပီ။ မနေ့က လွှတ်လိုက်တဲ့ တလှုပ် သစ်ခုတ်သမား ၁၅၀ကို ထောင်ထဲမှာ ဥနှောက်ဆေးပီး သေခြာမှ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာဂွင့် ပေးလိုက်တာပါ။
ရွာထဲမှာလဲ မင်းအတွက် နာကြည်းဂျလွမ်းလို့ သဘောင်္catပတိန် အူးဖောကိုယ်ဒိုင် အူးစီးပီး တလှုပ်ပြည်ကို ရေကြောင်းချီပီး အမြောက်နဲ့ ပစ်ခတ်ပေးမည်တဲ့။
လူ့ဂုဏ်သိက္ခာမဲ့ တလှုပ်ကူမြူ နစ် တရားစီယဉ်မှု
အဲဒီ တလှုပ်၁၅၀ စလုံးဟာ ယူနန်ပြည် လွတ်မြောက်ရေး၊ မြန်တျန့်ပြည်နဲ့ ပူးပေါင်းရေး မြေအောက်တိုက်ပွဲဝံပေးဂျလိပ်မဲ။ မင်းစွန့်ခဲ့ရတဲ့ အသက် အလဂါး မဖြစ်စေရဘူး။ မကြာခင် ရှမ်းပြည်ဂျီး ၂ဆကျယ်ပြန့်လာဇေယျမယ်။ အဲဒီကြမှ တလှုပ်မတွေအကုန် ……………………………………………………………………………………….. …………………. ……………………………………………………………………………………………………………………..
အဘဖော ကို ဝန်းရံဂျ!!!!
ဟုတ်ပ့ါ၊ ခေါင်းစဉ်ဖတ်ပြီး အပြေးဝင်လာတဲ့သူကို အမောဆို့သွားစေတာကိုးးးး
Sai Naw Kham wasaBurmese drug trafficker and leader ofamajor drug trafficking gang in the Golden Triangle,amajor drugs-smuggling area where the borders of Burma, Laos and Thailand converge. He was executed for killing 13 Chinese sailors.
Location Chiang Saen District, Chiang Rai Province, Thailand
Deaths 13 crew members
လူ၁၃ယောက်သတ်ပစ်တဲ့ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်နဲ့.. သစ်ခုတ်တဲ့အလုပ်သမားနဲ့.. အမှု.. ပစ်မှု တန်းတူတော့ထားလို့မရ..။
တော်ကြာ.ဟိုက.. ဘိုဂျုပ်ကြီးတွေ ပိုင်ဆိုင်ငွေမောင်ပိုင်စီးပလိုက်ရင်.. ဘယ်နှာလုပ်မလဲ..
စိန့်ပြည်ကွန်မြူနစ်ဟူသည်.. လုံးဝစိတ်ချ၍မရဆိုတာကို.. ဘိုချုပ်ကြီးတွေအသိအမှတ်ပြုလိုက်တဲ့သဘော..
နောက်၁၅နှစ်မှာ.. ကမ္ဘာစီးပွားရေးအင်အားအကောင်းဆုံး.. နံပါတ်၎ဖြစ်လာမဲ့.. အာစီယံကို.. ကပ်..
David Cameron seeks markets in South-East Asia
The prime minister mixesabusiness pitch with gentle jabs on freedom of speech
Jul 28th 2015 | SINGAPORE | Britain
“WHEN I visited [South-East Asia] three years ago, it was the 12th-largest economy in the world,” said David Cameron, Britain’s prime minister, fromastage at the National
University of Singapore on July 28th. “Now it’s the seventh, and it’s predicted to be the fourth-largest single market by 2030.” Longtime South-East Asia watchers may struggle to
suppressacynical smile at Mr Cameron’s mention ofa“single market”: making the ten-country Association of South-East Asian Nations (ASEAN) intoasingle market is one of
those political goals that has been just around the corner for years. But the fundamental point is true enough. ASEAN isalarge and growing market, with which Britain does
surprisingly little business. Mr Cameron noted that Britain trades more with Belgium than it does with the four countries on his itinerary (Indonesia, Malaysia, Singapore and
Read more at http://www.economist.com/news/britain/21659966-prime-minister-mixes-business-pitch-gentle-jabs-freedom-speech-david-cameron-seeks#vUWq7mSc2edyLep7.99
အနော်ကဒေါ့ cat ခြင်း cat နောင်၁၅နှစ်မှာ ရှယ်ဖြစ်လာမည့် သန်ဆင်ခိုင်လေး ပါပါး ကြောင်က္ခထီး မာမွတ်ခိုင်မ်ကိုပဲ catမည်။
“တော်ကြာ.ဟိုက.. ဘိုဂျုပ်ကြီးတွေ ပိုင်ဆိုင်ငွေမောင်ပိုင်စီးပလိုက်ရင်.. ဘယ်နှာလုပ်မလဲ..”
“ကျနော်တို့ တရုတ်ကိုလည်းကြောက်ရပါတယ်” ဆိုတာ သင်းတို့ ခိုးထားသမျှတွေ…
အနောက်နိုင်ငံကလက်မခံလို့ တရုတ်မှာ ထား ထားရတာ… ကြောက်သင့်ပါတယ်လေ…
ဘဖော တစ်ယောက် အသံပျောက်လို့ တကယ်ဘဲ စီလုတ်ပြီ ထဲ စစ်ချီ နေရော့သလား။
တစ်နေ့က တရုတ်ပြည် က ရှယ်ယာ တွေ ဈေးထပ်ကျ နေပြန်ပြီ။
အဘ တို့ စီလုတ်က လာတဲ့ ပဲနီ စီလုတ် ထဲ ပြန်သွား ဖြစ်တော့ မလား မသိ။
သိပ်လဲ နှမြောမနေပါနဲ့။ အလကား ရထားတာဘဲဟာကိုများ။
စီလုပ် က ဒါဆိုဒါပဲ ဟိုဟာလာမလုပ်နဲ့
ဥပဒေရဲ့ အထက်မှာနော် အဘတို့ ရှိတယ် အဘတို့ အထက်မှာနော် စီလုပ်ရှိတယ်
ဘူးဆိုနော် ဖရုံ မသီးနဲ့ စီလုပ်နော် တန်းစီပြီး လုပ်ပစ်လိုက်မယ်။
.စိုင်းစိုင်းကိုပဲ… မရှင်းမရှင်း ခေါင်းစဉ် တပ်ခွင့်ပြုသည်။
.ဖွေးဖွေး၏ အမည်အား..ထိုကဲ့သို့ မရှင်းမရှင်း လုပ်ခွင့် မပြု ရေးချ မပြု…